Biyaha Shiidaal Ma Laga Samayn Karaa? W/Q: Dr. Fosi Kofal | Hargeysa World~Herald
Biyaha Shiidaal Ma Laga Samayn Karaa? W/Q: Dr. Fosi Kofal
OpinionBiyaha Shiidaal Ma Laga Samayn Karaa? W/Q: Dr. Fosi Kofal
Beryahan waxaa si degdeg u qaaliyoobay qiimihii shiidaalka. Dhaqaalihii bulshada oo aan weli si fiican uga soo kaban Covid-19, ayaa waxaa isku raacay qiimaha shiidaalka ee kacay iyo sicir-barar maceeshadda ah oo weheliyaa. Haddaba, su’aal caalamka layska weydiinayo ayaa waxay tahay: maxaa weli loo ikhtiraaci waayey gaadiid biyaha ka dhigta shiidaal? Maadama oo biyaha meel walba laga helo, ayna jabanyihiin waxay bedeli lahaayeen shiidaalkan qaaliyoobay ee soo-saaristusana adagtahay.
Su’aashaas waxaa laga yaabaa inaad ku qososho ama la yaabto. Balse ogsoonoow, biyuhu waxay ku jiraan mucjisooyinka ugu waaweyn ee Ilaahay kownkiisa ku abuuray. Waa walax astaamaheeda iyo waxtarkeedaba aan la soo koobi karin. Biyaha waxaa ammaan ugu filan in Ilaahay SWT uu biyaha u doortay in carshigiisu ku dul-fadhiyo:
وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء* – سورة هود*
Inta badan, qof saynisyahan isku sheegaya ayaa maalinba shir jaraa’id qabta oo ku andoocada inuu soo saaray baabuur biyo ku shaqeeya. Arrintani waxay ka dhacdaa dalalka USA, India, Pakistan, Sri Lanka iyo Phillipines, waana been iyo suugo-saynis (pseudo-science) aanay waxba ka jirin.
Sidaad ogtihiin, labada curiye ee biyuhu ka kooban yihiin waa hydrogen iyo oxygen; H2O. Labadaas curiyaba waa qaar lagu yaqaano inay tamar ku keysantahay oo si fudud u guban kara. Sirtu waxay ku jirta in moolikiyuulka biyaha loo kala jabiyo hydrogen iyo oxygen, ka dibna loo isticmaalo shiidaal ahaan. Habka korantada (electrolysis) ayaa inoo sahlaya inaynu kala jabino moolikiyuulka biyaha sida tan:
Maadama uu arrinkan macquul yahay, maxaa hortaagan in sida tan la soo saaro injiin mooliyikuulka biyaha kala jabiya oo shiidaal ahaan u isticmaala? Dhawr caqabadood ayaa jira oo ay ka mid yihiin:
1. Biyuhu waa walax deggan (stable molecule). Markaas, in biyaha loo kala jabiyo hydrogen iyo oxygen waxay u baahantahay tamar badan.
2. Biyo kasta shiidaal ahaan looma isticmaali karo. Biyaha keliya ee shiidaal geli karaa waa kuwa la miiray (distilled water). Biyaha la miiray waa nadiif ah oo wax kasta oo wasakh ah ama macdan ah laga saaray.
3. Biyaha nadiifta ahina waa qaar ka madhan waxyaabaha fududeeya habka korontada ee loo baahanyahay in biyaha lagu kala jabiyo.
Weli dunida sayniska waxaa si xawli ah uga socda daraasaddaha noocan oo kale ah. Sanadkan aynu ku jirno ayay Khan et al (2021) tijaabo ku muujiyeen in oxyhydrogen (HHO) iskeed u guban karto, sidaas darteedna ay si dhib yar u bedeli karto doorkii naaftada.